360 ° Iimboniselo zabucala Penthouse Llandudno
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDusty
Indlu yestudiyo ye-penthouse yabucala enembono entle ngokwenene yolwandle lwaseLlandudno, ulwandlekazi lweAtlantiki kunye neentaba macala onke. Ibucala, ikhululekile, iplani evulekileyo, ibanzi kakhulu kwaye ifakwe kakuhle ngethafa elikhulu elingaphandle elinelanga. Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nayo yonke into oyifunayo kwiholide efanelekileyo ezimbini.
Iimbono ziyaphefumla ngokwenene. Indlu ibanzi kwaye ifakwe kakuhle ngayo yonke into oyifunayo. Ikhitshi elithandekayo elijonge ulwandle. Indawo yokuhlala eneplani ekhululekileyo evulekileyo kunye nendawo yokufunda umntu. Nceda uqaphele ukuba akukho TV kuba yonke ifestile yimbono.
I-Llandudno izidla ngolunye lolona lwandle lubalaseleyo eKapa oluneminenga kunye nee-dophin ezindwendwela rhoqo. Kukho izibonelelo zemidlalo xa ziceliwe ezifana nokusefa, iinkundla zentenetya; iinkundla zesquash; Ukutshona kwelanga kweyoga elunxwemeni kunye nokuhamba okuninzi kunye nokuhambahamba macala onke.
Uthuli uya kukubulisa xa ufika kwaye akushiye ngasese, kodwa uyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo enayo.